Lab Ultrasonic Equipment Equipment - China Lab Ultrasonic Equipment Equipment Abakhiqizi nabahlinzeki
lab 1000W uphenyo lwe-ultrasound homogenizer
I-Ultrasonic homogenizing inqubo yokwenza ukunciphisa izinhlayiya ezincane kuketshezi ukuze ziba zincane ngokufanayo futhi zisatshalaliswe ngokulinganayo. Lapho ama-processor we-ultrasonic asetshenziswa njengama-homogenizers, inhloso ukunciphisa izinhlayiya ezincane kuketshezi ukuthuthukisa ukufana nokuzinza. Lezi zinhlayiya (isigaba sokuhlakazeka) kungaba okuqinile noma uketshezi. Ukwehliswa kobubanzi obusho izinhlayiya kwandisa inani lezinhlayiya ngazinye. Lokhu kuholela ekwehlisweni kwephakathi elijwayelekile ...
I-Ultrasonic Laboratory Homogenizer Sonicator
I-Sonication isenzo sokusebenzisa amandla omsindo ukuphazamisa izinhlayiya kusampula, ngezinhloso ezahlukahlukene. I-ultrasonic homogenizer sonicator ingaphazamisa izicubu namaseli ngokusebenzisa i-cavitation namagagasi e-ultrasonic. Ngokuyinhloko, i-homogenizer ye-ultrasonic inethiphu edlidliza ngokushesha okukhulu, ibangele amagwebu kusisombululo esiseduze sakheke ngokushesha futhi siwe. Lokhu kudala amagagasi okusika nokushaqeka ahlukanisa amaseli nezinhlayiya. I-ultrasonic Homogenizer sonicator inconyelwa i-homogenization ...
Izixhobo ezahlukahlukene zihlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zokuhlola. Ngaphezu kokugqoka izingxenye, wonke umshini uqinisekisiwe iminyaka emi-2.
Imishini yokusabalalisa i-ultrasonic nanoparticles engu-1500W
Le mishini ingasetshenziselwa ukuhlakazeka, ukunciphisa usayizi wezinhlayiyana, izixazululo ezifanayo, ukuxazulula izixazululo zokumiswa, ukwelashwa kwezinhlayiyana, njll.
I-1500W laboratory nanomaterials homogenizer
Izinhlayiya zesisombululo zincishisiwe kakhulu, okunenzuzo yokuthuthukisa ukufana nokuzinza kwesisombululo esixubekile. Izinga lemishini lizinzile, iwaranti yeminyaka emi-2 nokusekelwa kobuchwepheshe kokuphila konke.
I-1000W lab homogenizer ye-ultrasonic
Le lab homogenizer ye-lab inamandla we-1000w futhi ingasebenza kuze kufike ku-2500ml njalo. Ifanele izixazululo ezahlukahlukene futhi isiza ukuthola ngokushesha idatha ehlukahlukene yokuhlola.